Godina Gujiitti mormiin ummataa cimaan geggeeffamaa jira - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Godina Gujiitti mormiin ummataa cimaan geggeeffamaa jira
Godina Gujii naannoo addaddaatti sochiin diddaa gabrummaa guddaan geggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Hiriira mormii oo’aa magaalaa Bulee Horaatti taasifamaa jiru irratti ummanni kumaatamni hirmaachuun beekameera. Mormiin kuni irra jireessatti kan taasifamaa jiru magaalota Bulee Horaa fi Haya Dimmaa; akkasumas gandoota Daawwaa fi Ejersa Goorootti.
Ummanni godina Gujii saamicha albuuda Adoolaa, Shaakkisoo fi Boree woggoota 25 olii, adda durummaadhaan MEDROC-Allaamudiiniiin, taasifamaa ture daanditti bayuudhaan mormaa jiru. Gaafii mirgaa fi haqaa kanaaf, akkuma baratame, deebiin rasaasa Agaazii ta’eera. Namoota hiriira kana irraa qooda fudhatan keessaa hanga ammatti namni tokko ajjeefamuu fi sadi madaayuun gabaafameera.
Tankaarfiin garajabeenyaa irratti fudhatamus ummanni Gujii mirga isaanii gaafachuu fi qabeenya gooftaan isaaniif kenne tikfachuuf gootummaan falmachuu hin dhiisne. Doorsisaa woraanaa sodaatanii hanag gaafiin isaanii debii quubsa argatutti manatti kan hin galle ta’uu jala sararaniiru. Inumaa, kan tankaarfiin garajabeenyaa isa dallansiise dargaggoon Gujii, daandii cufuu fi buufata gumruukaa gubuudhaan aarii isaanii bayuuf yaalaniiru. Ummanni mormii baye kuni namoota hidhamanis humnaan gadi lakkisiisuun isaanii beekameera.
Godinni Gujii naannolee Oromiyaa albuuda addaddaan badhaate keessaa tokko. Haa ta’uu malee qabeenyi uumaaa kuni ummata godinichaa kan tajaajilu hin turre. Dhaabbileen albuudaa baasan woggoota hedduuf saamicha dangaa hin qabne godina kanaa fi guutuu Oromiyaa irratti geggeessaa kan turan. Akka ragaatti, guyyoottan muraasa dura mataan Wajjira Oodiitii Itophiyaa, Ob.Gammachuu Dubbisoo, miseensota paarlaamaa Itoophiyaa fi hoogganoota Waajjira Minsitera Albuudaa fi Anniisaa Itoophiyaa funduratti dhaabbileen albuuda baasan naannoo Oromiyaatiif wanti kaffalan tokko kan hin jirre ta’uu dubbate. Bara 2013 keessa qofa naannoon Oromiyaa dhaabbilee albuudaa irraa argachuu kan isarra ture qarshii miliyoona 427 dhabuu ragaa baye. ‘Biyyattiin,’ jedhe ob.Gammachuu Dubbisoo, ‘dhaabbilee albuuda baasuu irratti bobba’aniin saamamaa jirti.’
mormii bulee horaa
mormii godina gujii
Previous articleItoophiyaan labsii Paarlaamaan Awurooppaa baase gufachiisuudhaaf loobii qaxaruuf jedhame
Next articleUmmata beelaye du’a jalaa baraaruuf gargaarsa biliyoona $1.4 tu Itoophiyaa barbaachisa